DAAWO:- Ardaydii galay imtixaanaadka dugsiyada Sare oo si adag udhaliilay hadalkii Goodax “Imtixaankeeni sidee loo hakiyay?”.
May 14, 2019 Xafiiska Puntland Faallooyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Somalia, Wararka Maanta 0
Boqolaal arday ah oo ka careeysnaa go’aankii ay wasaaradda waxbarashada Soomaliya ku joojisay Imtixaanaadka Dugsiyada sare ayaa maanta banaanbax weyn ka dhigay magaalada Muqdisho.
Ardaydaan oo ku qeylinayay ereyo ay ku muujinayeen, sida ay ugu xun yihiin in markale dib loogu celiyo Maadooyinka qaar ee Imtixaanka ayaa isugu tagay Taalada Dajirka Daahsoon degmada Boondheere ee gobolka Banaadir.
Ardaydani oo isugu jiray Wiilal iyo Gabdho ayaa Shabelle u sheegay in aysan aqbali karin go’aanka wasiirka waxbarashadda, islamarkaana iyagu aysan qaadeyn mas’uuliyada ah Imtixaanka la musuq maasuqay.
Sidoo kale banaanbaxyo waa weeyn oo ay arday Soomaaliyeed uga soo horjeedaan tallabadan ayaa ka kala dhacay qaar ka mid ah magaalooyinka waa weyn ee dalka.
Wasiirka waxbarashadda Mudane Cabdullahi Goodax barre oo xalay la hadlayay Warbaahinta Qaranka ayaa ku dhawaaqay in dib u dhigay Imtixaanka Shahaadiga ah, isagoona shaaciyay in markale la qaadi doono 27 bishan May ee 2019-ka.